ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်မှ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသမီး ဒေါ်ဒေါ်တင် (ရမည်းသင်း)ထံပေးစာ တစ်စောင်ပါသာဓုခေါ်ဖွယ် ကျေးဇူးတရားသိတတ်မူ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်မှ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသမီး ဒေါ်ဒေါ်တင် (ရမည်းသင်း)ထံပေးစာ တစ်စောင်ပါသာဓုခေါ်ဖွယ် ကျေးဇူးတရားသိတတ်မူ …
ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်မှ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသမီး ဒေါ်ဒေါ်တင် (ရမည်းသင်း)ထံပေးစာတစ်စောင်ပါသာဓုခေါ်ဖွယ်ကျေးဇူးတရားသိတတ်မူ
“နံနက်ခြံထဲဆင်းတိုင်းပန်းပင်များကိုမြင်လျှင်ပို့ ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးတင်မေတ္တာပို့ ပါသည်။အောင်ဆန်းဦးနှင့်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျန်းမာကြပါသည်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အတွက်ဒေါ်ဒေါ်ရှေ့ ဆောင်၍တိုးတက်ရန်ဆောင်ရွက်နေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ AsianFameMediaGroupကLivingမဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံအယ်ဒီတာညီမငယ်လေးနွေးနွေး(နွေးနွေးစစ်အောင်)ရဲ့ မိတ်ဆွေထံမှအလွန်အင်မတန်သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမား သည် ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သည့်စာတစ်စောင်ကိုဖတ်လိုက်ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်မှ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသမီးဒေါ်ဒေါ်တင်(ရမည်းသင်း)ထံပေးစာတစ်စောင်ဖြစ်ပြီးထိုစာပါအကြောင်းအရာတွေထဲထိုခေတ်ကာလအမျိုးသမီးအဖွဲ့ များက လည်းတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအတွက်တစ်တပ်တစ်အားထမ်းရွက်လုပ်ဆောင်နေပုံကိုအရိပ်အမြွက်မှသိလိုက်ရသလိုဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်အနေနှင့်လည်းအချန်နှင့်အမျှခရီး တွေ ထွက်ရင်း လူထုနှင့်တစ်သားထဲနေထိုင်ကာပြည်သူတို့ ၏ဘ၀ကိုမျက်ခြေမပျက်သိမြင်သုံးသပ်နေကြောင်းသိလိုက်ရ၏။ထိုနည်းတူဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ 
သော လူ နေမူပုံစံဖြင့်ပြုမူနေထိုင်ကြောင်းသာမကမိသားစုပုံရိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်လူထုအပေါ်ထားသည့်စိတ်သဘောထားစံပြုဖွယ်ရာကျေးဇူးတရားသိတက်မူတို့ ကိုပါစာကြောင်း
ရေ အနည်းငယ်မျှမှာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှိနေစေသည်ကိုဖတ်ရူမြင်တွေ့ ရ၍အလွန်အင်မတန်သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားသည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သည့်စာတစ်စောင်ဟုညွှန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ၏။
ရန်ကုန်ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်းစာရေးရန်စိတ်ရှိပါသော်လည်းအလုပ်အလွန်များပါသဖြင့် ယ္ခုဒေါ်ဒေါ်ထံသို့ ဝါးခယ်မအသွားသဘောင်္ပေါ်ကနေ၍ရေးပို့ ပေးပါသည်။ယနေ့ နံနက် ရန်ကုန်မှထွက်၍မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင်တစ်ပတ်မျှကြာပါမည်။ရမည်းသင်းတွင်ခေတ္တနေစဉ်ဒေါ်ဒေါ်နှင့်တွေ့ ဆုံရသည်ကိုလည်းကောင်းမေတ္တာနှင့်ကျွေးမွေးသောညစာသည်ခရီးပန်းစဉ် သုံး ဆောင်ရသည်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါသည်။ ဒေါ်ဒေါ်ပေးပို့ သောပန်းပင်များနှင့်တကွစားဖွယ်သစ်သီးစုံအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ပန်းပင်များလည်းကောင်း မွန်စွာ ပေါက်နေပါသည်။နံနက်ခြံထဲဆင်းတိုင်းပန်းပင်များကိုမြင်လျှင်ပို့ ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးတင်မေတ္တာပို့ ပါသည်။အောင်ဆန်းဦးနှင့်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျန်းမာကြပါ သည်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အတွက်ဒေါ်ဒေါ်ရှေ့ ဆောင်၍တိုးတက်ရန်ဆောင်ရွက်နေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ….ကျွန်တော်အပိုဆိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်နဲ့ ဤစာထဲမှ
ကျွန်တော်မမြင်မတွေ့ ခဲ့ပါသောအဖိုးတန်အကြောင်းအချက်များကိုကွန်မန့် ရေး
This entry was posted on December 19, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “ဘာပဲပြောပြော—စိုးကြောက်တယ်တဲ့လား?” (ကဗျာ)